Talo ayaan u baahanahay Maxaa ninkeeyga ka dhigey WAX MA TARE ..?? - iftineducation.com
Talo ayaan u baahanahay Maxaa ninkeeyga ka dhigey WAX MA TARE ..??
iftineducation.com – Magaceeygu waa Maryan , waxaan ku noolahay Wadanka Mareeykanka Magaalada Seatle .
Waxaan guursaday nin aan is jecleen sanadkii 2009 .
Aniga iyo seygeyga waxaan gaalnay Guur aad iyo aad u macaan .
Macaankas oo ula jeedo dhinac walbo ,, siiba dhinaca SARIIRTA..
Waxaaynu eheen labadeenuba laba qof oo jecel in ay aad ISKAGA SHAQEEYAAN .
seeygeeygu wuxuu ahaan jiray Nin sida uu Qaraacayo GEEDKII AFGOOYE ilaa uu ka murxo , kamuuna daali jirin.
aniguna aad iyo aad ayaan ugu RAAXEEYSAN JIRAY..garaacitaankaas.
Waxeeynu noloshaas raaxada badan ku jirnay ilaa Sanad iyo bar kii koowaad ee guuurkeena .
Markan dhalay cunugii koowaad ayaan waxaa ka dareemay odaygeeyga inuu xooga is badalay sababto ah waxaan arkay isagoo aad moodid inuu dan saas ah iga leheen , sababto ah wuxuu ahaa nin aad ii jeceel aadna u jecel dheesha sariirta ..isagoo mar haduu niyeeysto aan laga fujin karin,,,siduu ku Galiyo ba waa kii galiya ,, isagoo mar markaan ku adkeeyo ii TUUGI JIRAY sida cunug yar ,,
waxeey socotay oo ay socotay ayaa waxaa dhacday baryahan dambe in uu san xataa isku dayin xataa HAL MAR inuu asbuuci ii raaxeeyo.. inaan anigu ku khasbo mooye ,,,,isagoo caga jiidaya ayuu 5 daqiiqo i boodbootiyaa ,,kadibna wuu iska seexdaa…
maxaa iska badalay odaygeyga miyeey dhici kartaa inuu baanaanka ka soo casheeyo ,, oo ay u joogan dad kale sababtoo ah wuxuu ka shaqeeya TAKSI ,,Habeen kii ilaa 2 ayuu shaqeeya siduu ii sheegay
Ma Noqon kartaa inuu uu xanuun ku dhacay yareenaya hamigiisa galmada uu igala xishooday inuu iii sheego
Sidee baan ku soo jiidan karaa ninkeeyga oo aan aad u jeclahay laakin aan isiineeyn raaxadii aan uga bartay markii hore ,,
DAAWO MUUQAALKA GABADHAN:
Naagaha Gadaal u wayn Waa kuwa ugu raaxa macaan marka….
Madaxweyne Museveni oo si Weyn ugu horreeya doorashadii Madaxnimo ee ka dhacday UGANDA.